Faransiisku wuxuu ku andaconaya tuhmanayaalka in ay ku dhinteen maqaayada Yuhuudda - Home somali news leader
Home NEWS Faransiisku wuxuu ku andaconaya tuhmanayaalka in ay ku dhinteen maqaayada Yuhuudda
Faransiisku wuxuu ku andaconaya tuhmanayaalka in ay ku dhinteen maqaayada Yuhuudda
Faransiisku wuxuu ku andaconaya tuhmanayaalka in ay ku dhinteen weerarkii maqaayadaha Paris-Yuhuudda
Qof looga shakisan yahay weerar 1982 ka dhacay xaafad ay degan yihiin Yuhuudda oo ku taal Paris oo ay ku dhinteen lix qof Sabtidii ayaa dacwad lagu soo oogay oo ay xireen mas’uuliyiinta Faransiiska ka dib markii laga soo celiyey Norway, ilo sharci ayaa sidaas yidhi.
Walid Abdulrahman Abu Zayed waxaa ku soo oogay dacwad dil iyo isku day dil ah garsooraha magaalada Paris oo ku takhasusay dambiyada argagixisada, sida uu sheegay ilo sharci oo codsaday inaan la magacaabin.
Wuxuu ka soo muuqday garsooraha ka dib markii uu yimid goor dambe oo jimce ah garoonka diyaaradaha Paris Charles de Gaulle isagoo ka yimid Oslo, halkaas oo uu ku noolaa ilaa 1991.
Abu Zayed ayaa lagu qabtay bishii Sebtember magaalada Skien ee koonfur-galbeed ee Oslo iyadoo Norway ay oggolaatay dhiibistiisa 27-kii November.
Qaraxii ka dhacay makhaayad Yuhuuddu leedahay oo ku taal degaanka Marais ee caasimadda Faransiiska, oo sidoo kale waxyeello soo gaadhay 9-kii Ogosto, 1982, waxaa loo aaneeyaa ururka Abu Nidal, oo ka go’ay kooxda Fatax ee Falastiiniyiinta xagjirka ah.
Abu Zayed ayaa beeniyay inuu ku lug lahaa weerarka, kaasoo u dhaxeeyay seddex ilaa shan nin ay rasaas ku fureen isla markaana bambaanooyin ku tuureen maqaayada.
Ninkayga weligiis qof ma dilin. Weligiis ma tagin Faransiiska, xaaskiisa ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee AFP sanadkii 2015 iyadoo ka jawaabeysa amar qabasho caalami ah oo ay soo saartay France
Abu Zayed wuxuu sheeganayaa inuu ku sugnaa Monte Carlo markii la weerarayay.
Ka soo horjeedkiisa dhiibistiisa, wuxuu u sheegay maamulka Norway: “Ma jecli Faransiiska. Ma doonayo inaan galo xabsi ku yaal Faransiiska. ”
Maamulka Faransiiska ayaa soo saaray warqad waaran ah oo lagu soo xirayo weerarkii lagu qaaday laba tuhmane oo ku sugnaa Jordan iyo mid kale oo la rumeysan yahay inuu ku sugan yahay Daanta Galbeed.
Sanadkii 2019, Jordan ayaa diiday inay dhiibto mid ka mid ah tuhmanayaasha sababtoo ah kiisku wuxuu ahaa mid aad u da ’weyn, taas oo caqabad ku noqotay rajada qoysaska dhibanayaasha in dambiilayaashu ugu dambeyn la horkeeni doono sharciga.
Kiiskan ayaa sidoo kale ahaa mid la isla dhexmarayay oo ku saabsan heshiisyo mugdi ah oo u dhexeeya Faransiiska iyo ururka Abu Nidal.
Qareenada dadka dhintay ayaa sheegaya in dukumiintiyada ay kalsooni siinayaan fikirka ah in sirdoonka Faransiiska ay kooxda u xaqiijiyeen in aan la maxkamadeyn doonin ilaa iyo inta aysan weeraro badan ka geysan Faransiiska.
Madaxii hore ee Agaasinka Kormeerka Territorial (DST) Yves Bonnet ayaa qirtay intii lagu guda jiray dhageysiga dacwada in uu jiray “heshiis aan qornayn” oo dhexmaray labada dhinac, sida uu qoray wargayska Le Parisien.
Previous articleFrance accuses suspects in fatal Paris-Jewish restaurant attacks in 1982
Next articleTrump is fighting “rigged” results in his first post-election rally